गर्भपतन के हो ? यसले बाँझोपनको समस्या आउँछ ? – AB Sansar
November 21, 2020 Admin01LeaveaComment on गर्भपतन के हो ? यसले बाँझोपनको समस्या आउँछ ?
मेरी गर्लफ्रेन्डले दुईपटक दुई महिनासम्मको गर्भपतन गराएको थाहा पाएँ । के अब उनबाट सन्तान हुनसक्दैन ? यसले भविष्यमा आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा कुनै असर गर्छ कि गर्भपतनको असर गर्भको शिशु (भू्रण) बाँच्न सक्ने अवस्थामा पुग्नुभन्दा पहिले नै गर्भावस्थाको अन्त्य हुनुलाई नै गर्भपतन भनिन्छ ।
सामान्य अवस्थामा यस्तै २४ हप्तासम्मको गर्भको अवस्थालाई शिशु बाँच्न सक्ने अवस्था मानिएको छ ।विकसित देशहरूमा त्यसभन्दा केही बढी उमेरका गर्भस्थ शिशुलाई पनि बचाइएको पाइन्छ । गर्भ आफैं पनि तुहिन सक्छ भने अर्कातिर औषधी, औजार, सुई वा अन्य उपाय प्रयोग गरेर समेत गर्भपतन गराउन सकिन्छ ।
औषधीको असर ? अहिले नेपालमा पनि औषधी खाएर गर्भ पतन गराउने विधि प्रयोगमा आइसकेको छ । तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित र सेवन सरल भएकाले गरिएको हो । यसका लागि निश्चित औषधी मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ भने तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले सेवा प्रदान गर्ने नियम बनाइएको छ ।
समस्या के हो ? तपाईंले आफ्नी केटी साथीले गर्भपतन गराएको थाहा पाएँ भनेर लेख्नुभएको छ । यसले के संकेत गर्छ भने तपाईंहरूबीच न त गर्भनिरोधका बारेका कुरा हुन्छ वा न त गर्भ रहे के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल नै हुन्छ । यसले एक किसिमको संवादहिनताको स्थितिलाई देखाउँछ ।
के गर्भपतनले बाँझोपन गराउँछ ? गर्भपतनका लागि विभिन्न पद्धति अपनाउन सकिन्छ । कसरी, कहिले र कोबाट गराइएको भन्ने कुरामा यसका जटिलताहरू निर्भर गर्छन् । गर्भको निरन्तरता एवं सुरक्षित किसिमले दक्ष व्यक्तिवाट गराईएको गर्भपतनलाई दाँज्दा यसको कुनै दीर्घकालिन असर पर्छ भन्ने कुराको खासै आधार छैन ।
गर्भावस्थाको पहिलो तीन महिनामा भ्याकुम एस्पिरेसन पद्धतिवाट गराइएको गर्भपतनले महिलाको सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमतामा खासै नकारात्मक असर पार्दैन । विशेषत: अदक्ष व्यक्तिद्वारा गर्भपतन गराउँदा पाठेघरमा पर्ने चोटपटक तथा संक्रमण जस्ता कुराले भने प्रजनन क्षमतामा असर पार्न सक्छ । भावी सन्तानलाई असर पर्ने कुनै ठोस आधार भने छैन भनेर बुझ्नुभए हुन्छ ।
कोरोना निको भएकाहरुलाई देखिन थाल्यो अर्को घातक रोग, ८ संक्रमितको गु`म्यो आखाको रोशनी।
सडक दुर्घटनामा मृ,त्यु भएकी १३ बर्षिया बालिकाको शव अस्पतालमै कुकुरले खान थालेपछि….